Location: musha » Kutumira » Quick News » Nzira dzekupemberera Yellowstone National Park's 150th Anniversary
Iine Mapindiro Matatu, Montana ndiyo Yakanakira Nzvimbo Yekusangana nePaki
Iri muMontana, Idaho neWyoming, Yellowstone National Park - iyo paki yekutanga pasi rose - iri kupemberera kusvitsa kwayo makore zana nemakumi mashanu gore rino. Inosanganisira 150 miriyoni maeka, Montana ine matatu pamashanu ekupinda mupaki, kusanganisira chete musuwo unowanikwa kune gore rose kufamba kwemotokari kuburikidza neGardiner.
Muna 2021, Yellowstone National Park yakagamuchira vashanyi 4.86 miriyoni uye 2022 iri kuumbwa kuva rimwe gore rakabatikana sezvo vashanyi vanopemberera imwe yenzvimbo dzakakosha kwazvo pasirese. Uye nepo vanhu vachange vachishanyira paki en masse zhizha rino, heino nzira dzakanakisa dzekuzviona pasina ruzhinji.
Inguva Yazvo. Hazvina mhosva paunoshanyira zhizha rino, mikana ndeyokuti uchawana mhomho yevanhu kana ukaenda masikati. Rongedza rwendo rwako kuitira kuti ufumire kubata chitsiga chiri kusimuka paGrand Prismatic Spring, tarisa Old Faithfulerupt mushure mekunge zuva ranyura uye kunyura muchiitiko chakatarisana nedenga rakazara nenyeredzi kana kumuka nezuva kuti utarise mirazvo yaro ichipararira pamusoro. Yellowstone ine nzvimbo dzakasiyana siyana.
Hike it Out. Chokwadi ndechekuti vashanyi vazhinji kuYellowstone National Park vanonamatira kumigwagwa. Kana iwe uchida chaizvo kutiza kubva kune vamwe vanhu, unofanirwa kurova makwara. Nemakiromita 900 emigwagwa mupaki yose, pane zvakawanda zvekusarudza kubva. Ramba uchifunga kuti iwe unofanirwa kugara uchikwira neshamwari, gadzirira, takura (uye ziva mashandisiro) bere spray uye kupa mhuka dzesango nzvimbo yakakura.
Enda NeMutungamiriri. Nepo iwe unogona kushanyira paki iwe pachako, imwe yedzakanakisa nzira dzekuva neruzivo rwakadzama ndeyekuenda nemutungamiri kana chipfeko pabhiza kana llama trek. Kune zvakare madhairekitori ane ruzivo anopa zviitiko senge kubhegi, kuchovha bhasikoro, kubata hove uye kutora mafoto, pamwe nekushanya kwemumugwagwa.
Uye nepo Yellowstone National Park icharamba iri bhaketi-rondedzero yekuenda, kune zvakawanda zvezvinhu zvekuona nekuita kunze kwemiganhu yepaki. Vashanyi vanokwanisa kubuda nyore kune imwe yemasuo matatu epaki muMontana munzira yavo yekuenda kune dzimwe adventures, kusanganisira:
Kutyaira Beartooth Highway. Chishamiso mukati uye pachayo, iyo Beartooth Highway iNational Scenic Byway inoruka nemuMontana neWyoming uye inowanikwa nekubuda muYellowstone kuchamhembe kwakadziva kumabvazuva. Iyo 68-mamaira-nzira inotambanukira kubva kuCooke Guta, Montana kuenda kuRed Lodge, Montana, uye inopa vafambi vayo-kudonha-kudonha maonero uye mukana wepamusoro pemadziva emakomo uye nzira muBeartooth Mountains.
Shanyira Red Lodge. Yakapoteredzwa nemakomo eBeartooth neAbsaroka, Red Lodge nderimwe remaguta madiki anoyevedza eMontana. Iine nhoroondo uye inofamba dhorobha, Red Lodge inzvimbo yekuisa pane yako yaunofanira-kushanyira runyorwa. Iri zvakare nzvimbo yekutangisa yekuvaraidzwa kwekunze uye kushanya, kusanganisira kukwira makomo, kukwira bhiza uye nzendo dzenzizi.
Kufamba Gardiner. Matanho kubva pamukova wekuchamhembe kwepaki idhorobha reGardiner. Kumba kune vagari vari pasi pe900, muchirimo iyi gedhi nharaunda iri kusvetuka. Kubva Nyamavhuvhu 23 - 28, pachave nemazano akati wandei acharatidzwa pamusha wetipi chirongwa panhoroondo Roosevelt Arch. Iwe unogona zvakare hove, raft uye kuyangarara neakati wandei emuno zvipfeko muGardiner, pamwe nekunyura muzvitubu zvinopisa zviri pedyo muParadhiso Valley.
Famba Munhoroondo yeMontana. Vashanyi vanovakira rwendo rwavo kuWest Yellowstone (kana kuti vanobva paki vachipfuura nemusuwo wekumadokero) havasviki maminetsi makumi mapfumbamwe kubva kuVirginia City neNevada City, maviri emataundi emweya akachengetedzwa zvakanyanya munyika. Munguva yezhizha (Zuva reChirangaridzo - Gunyana), vashanyi vanogona kutora nzendo dzenhoroondo, tarisa zvitoro zveko uye saloons, gara husiku munzvimbo yenhoroondo, pani yegoridhe kana kufamba nestagecoach.
Dzidza zvakawanda nezve Yellowstone
National Park uye nzira dzekupemberera kusvitsa kwayo 150th pa VisitMT.com.